Zọ kachasị mma iji melite LG G2 na gam akporo Lollipop | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | LG, ROM, Gam akporo nsụgharị
Na nkuzi ohuru ohuru a m ga - egosi gi bestzọ kachasị mma iji melite LG G2 na official Lollipop site na ihe mmetuta nke Rom ndi otu esi nri Omjọ, dabere kpamkpam na Ngwaahịa LG nke gam akporo Lollipop na ụdị v30 ya.
Nkọwa niile nke Rom a dị egwu, nke kachasị mma anyị nwere ike inweta maka LG G2 anyị, anyị ga-ahụ ha na official HTC Mania forum eri. Site ebe a Gam akporosis Anyị chọrọ ikele ndị otu a dị egwu nke Android chefs yana dị ka ụtụ, na-ebipụta nkuzi a ebe m ga-akọwa usoro niile ị ga - agbaso maka ntinye nke Rom.
1 Kedu ihe kpatara usoro a ji bụrụ ụzọ kachasị mma iji melite LG G2 na gam akporo Lollipop?
2 Chọrọ iburu n'uche
3 Chọrọ faịlụ
4 Otu esi emelite LG G2 na gam akporo Lollipop na Evomagix Rom
Kedu ihe kpatara usoro a ji bụrụ ụzọ kachasị mma iji melite LG G2 na gam akporo Lollipop?
Kedu otu ị ga - esi gụọ na aha nke post a, maka mụ onwe m nke a bụ ụzọ kachasị mma anyị ga-esi melite LG G2 na gọọmentị gam akporo Lollipop, na bụ na mgbakwunye na ịchekwa mgbọrọgwụ gbanwetụrụ na mgbake, nke dị mkpa maka ọtụtụ n'ime anyị, na mgbakwunye, anyị ga-enwe arụmọrụ Rome karịa LG mbụ, yana ọtụtụ Tweaks, arụmọrụ kachasị mma na na-ege ntị, na enweghi ike iche na ị ga-emelite site na OTA gaa na nsụgharị ọhụrụ nke ROM, ma ọ bụ ọbụna nwee ike ịgbanwe ya maka onye ọzọ mgbe anyị kwenyere na ọ kwesịrị.
Ihe ndị achọrọ iji banye na akaụntụ nwere oke:
Nwee LG G2 D802, D805 ma ọ bụ D806.
Nwee ya Mgbọrọgwụ na iji TWRP Iweghachite.
Nwee nadroid ndabere nke sistemụ arụmọrụ gị niile.
Nwere ndabere anyị niile ngwa ebe ọ bụ na na-egbu maramara usoro anyị ga-atụfu ha niile.
USB debugging nyeere site na LG G2 ntọala.
Batrị zuru ezu.
Faịlụ chọrọ melite LG G2 na gam akporo Lollipop maka ekele a Rom site na Evomagix ejedebe na nbudata Zips atọ a:
TWRP Iweghachite Bump 2.8.1. Site na njikọ a, anyị nwere ike ibudata ụdị Bump kacha ọhụrụ nke TWRP gbanwere mgbake dị mkpa ma dị mkpa maka na-egbu maramara A gam akporo Lollipop Rom si Evomagix.
Ogbogu Okonji kwekọrọ na ụdị njedebe anyị. N'ihi na D802 pịa Ebe a, D805 pịa Ebe a na D806 pịa ebe a
Official Evomagix Android Lollipop Rom dabere na LG's v30E.
Ozugbo anyị nwere faịlụ atọ ahụ dị mkpa mmelite na gam akporo Lollipop nke LG G2 anyị, anyị ga-e copyomi ha na Pendrive maka nrụnye site na USB OTG (akwadoro), ma ọ bụ na ebe nchekwa dị na LG G2 na anyị ga-amalitegharia na ọnọdụ Iweghachite iji soro ntuziaka ndị a.
Otu esi emelite LG G2 na gam akporo Lollipop na Evomagix Rom
Ka anyị gaa na nhọrọ wụnye na anyị wụnye TWRP Iweghachite Bump 2.8.1 enweghị Wipes ọ bụla.
Anyị na-aga reboot ma anyị họrọ Rụgharịa n'ime Ọnọdụ Iweghachite.
Anyị na-aga Nhichapụ nhọrọ ma họrọ nhicha niile dị na ya, na mkpokọta a ga-enwe 5 Wipes. Ndị ị họọrọ site na ịwụnye Rom site na ebe nchekwa dị na LG G2 Ikwesighi itinye akara Nhichapụ Esemokwu.
Ozugbo nhichapụ ahọrọ ahọrọ, anyị ga-aga nhọrọ ahụ wụnye ma họrọ zip nke Evomagix Android Lollipop Rom. Ozugbo usoro ọkụ ahụ mechara, nke na-ewe ihe dị ka nkeji iri, anyị agaghị amaliteghachi ọnụ mana anyị ga-alaghachi na isi peeji Iweghachite iji gbanye KK Bootloader dị ka ụdị LG G2 anyị.
Wụnye nhọrọ ma họrọ KK Bootloader dị ka ụdị LG G2 anyị kwekọrọ.
Site na nke a ị ga-emelitere ugbu a na gam akporo Lollipop otu n'ime Rom kacha mma anyị nwere ike ịchọta maka LG G2 a, na Rom si otu ihe egwu dị na egwu Evomagix Ọ na-arụ ọrụ zuru oke, ọbụlagodi karịa LG 30e gọọmentị nke Rom a dabere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Zọ kachasị mma iji melite LG G2 na gọọmentị gam akporo Lollipop
Ihe 109 kwuru, hapụ nke gị
Njikọ nke rom ahụ enweelarị nsogbu. Ọ ga-adị ka otu ọnwa gara aga na ha bipụtara rom maka LG G2 nke briquetted niile ekwe ntị na China rom na ọ bụghị maka mba nlereanya, na-ekwu na ọ bụ rom 802? Njikọ nke adịgboroja rom were ọtụtụ awa n'ihi ọsọ ọsọ nke ebe a nabatara ya, ọ jupụtakwara na mgbasa ozi. Na-enyo !!!
Enwere m ike ịkwado gị enyi na rom nke nsogbu enweghị ihe ọ bụla, mụ onwe m arụnyere ya na ọ kachasị mma enwere.
Enyi, enwere m Cloudy G2.1 arụnyere nke a ma emere m Boatloader KK nzọụkwụ, ọ bụrụ na ọ dị n'igwe ojii, ekwesịghị m ịme usoro a? Kedu otu m ga esi esi dozie ya ma ọ bụrụ na m nwere ike ịbanye na mgbake ebe ọ bụ naanị m na-ahụ akara ngosi LG ugboro ugboro
Francisco ọma ụtụtụ, enwere m nsogbu, emere m usoro ahụ mana mgbe m malitere sel ọ naghị ejikọ ya na onye ọrụ ahụ, yabụ m kwughachiri ya na ọ ka bụ otu, naanị ugbu a enweghị m ike ịbanye na mgbake ahụ, twrp na-ekwu na ọ anaghị akwado ekwentị, ọ naghị eme ma ọ bụ ihe ọ bụla na-egosi. Kedụ ka m ga - esi nwetaghachi ekwentị ???
Otu ihe ahụ na-eme m, ọ bụrụ na ị nwere ụzọ ọ bụla ị ga-esi edozi ya, mee ka m mara
Zaghachi na Barcelona2011
Luiz Diaz T dijo
Francisco, ajụjụ. Ihe mgbaàmà sel ahụ akwụkwụdoro m na ha gwa m na ọ na-edozi site na-egbu maramara baseband, kedu ka m ga-esi mee nke a?
Zaghachi Luis Diaz T
ezigbo abalị francisco enwere m nsogbu na - esote m gbalịrị ibudata kk bootloader lg g2 d805 mana njikọ mega dị ala gịnị ka m ga - eme
Zaghachi mauricio leandro
Ọ na-arụ ọrụ n'ogo nke igwe ojii g3 2.2?
Maka m ka mma karịa, a na-arụ ọrụ niile nke G2 mbụ ebe ọ bụ Rom dabere na gọọmentị Open Europe 30E.
Kedu maka batrị?
AKW spectKWỌ ahụ mara mma, na ọkwa nke Roms Stock Kit Kat ma ọ bụ karịa ka mma.
O n’arụ ọrụ ma ọ bụrụ na m nwere Jb?
Ee, ọ bụ ya mere na-egbu maramara KitKat Bootlader.
Ndo nke a erubeghị maka d800 att? Emelitere m ya na lollipop nke gọọmentị mana eziokwu bụ na m na-ahụ arụmọrụ n'okpuru na ọtụtụ lags na chinchi, ma ọ bụrụ na m ga - eme ya ma ọ bụrụ na m bụ lollipop ahụ.
Zaghachi jonathan sanchez
Zuru oke, daalụ nke ukwuu maka onyinye. Aga m etinye ya ma emechaa na D805.
Ọ bụrụ na m nwere lọọlị ROM, ọkachasị v30d, iji gbanye nke a, ọ dị m mkpa ịgbanye kit kat bottloader? Ebe etinyere lollipop.
N'ezie, ọ bụrụ na anyị amaliteworị na Rom dabere na Kit Kat ma ọ bụ Lollipop, anyị nwere ike ịhapụ usoro nke ikpuchi bootloaderKK.
Enwere m Cloudyg2 2.2 m nwere ike iwunye ya
N'ezie, naanị ihe ekwesiri iburu n'uche bụ na ọ bụrụ na anyị amalite site na JB Rom, anyị ga-ebu ụzọ gbaa BootloaderKK ọkụ.
Ma enwegoro kitkat 4.4.2 achọrọ m ịma ma m ga-agbanye boot ma ọ bụ baseband m na-achọ ịwụnye evomagix
Mgbe ahụ ọ dịghị mkpa, ọ bụrụ na nwụnye nyere gị nsogbu, ịmalitegharị na Ọnọdụ Iweghachite ma na-egbu maramara BootloaderKK ga-ezuru oke.
Ezi ụtụtụ Francisco, achọrọ m ịma ka igwefoto dị na ROM a ma ọ bụrụ na ọ nwere RadioFm, daalụ.
Ọ bụ LG LG izizi wee nwee ngwa ọdịnala LG niile, gụnyere igwefoto mbụ, FM Redio, Remote Ndenye, Memo ngwa ngwa + na ọbụlagodi arụmọrụ Windows ọsọ ọsọ maka mkpuchi ya na windo ahụ.
Morningtụtụ ọma, achọrọ m ịma ka igwefoto dị na ROM a ma ọ bụrụ na ọ nwere RadioFm, daalụ.
Ndewo Francisco, ọ bụ ihe siri ike ịlaghachi na KK mgbe ị wụnye rom a, ekele dịrị, daalụ.
Zaghachi Fernando Adrian Campazzo
No, dị nnọọ idetuo Rom na esịtidem ebe nchekwa ma ọ bụ na USB OTG na flash ka anyị na-emebu.
Ana m anwa ịgafe faịlụ evomagix ma m nweta njehie, ngwaọrụ ahụ kwụsịrị ịzaghachi ma ọ bụ kwụsịrị. Ọ gaghị ekwe m omume ịfefe rom na ebe nchekwa dị n'ime ọnụ, echiche ọ bụla otu esi edozi nke a. Ọ dịlarị na nbugharị USB, emegharịrị m ya, gbanwee eriri USB, na nkenke, agbalịrị m ihe niile.
Ahụrụ m anya. Nsogbu dị na nbudata. Ebudatara m ya ugboro abụọ ma m wee na ọ dị 500 mb mgbe mega file sị na ọ dịrị 1.33gb. Ọ na-ebudata ya na enweghị nsogbu mana n’ikpeazụ mgbe m na - ebudata ya na pc ọ na - apụta na ọ dị ọkara. Aga m anwa ibudata ya na opera ma ọ bụ mozilla kama chrome.
M ibudatara ya na Chrome na ụbọchị ya enweghị m nsogbu.
Ndewo m wụnye nke ọma ma wụnye bootloader d805 ma ugbu a m lere anya, ọ naghị ewere 4g kama naanị h +. Aghọtara m na ọ bụ d802 na ọ bụghị d805. Gịnị gaara eme?
Ndewo, ahụla m ma ọ bụrụ na ị were 4g mana ihe m na-aghọtaghị bụ ihe mere o ji pụta na ọ bụ d802 ma ọ bụrụ na ọ bụ d805 si Latin America na mmetụta ọ pụtara n'ihu.
Achọpụtaghị ya iji nweta mgbaàmà na Latin America, enwere m mmasị na ya, m ga-aga n'ihu na acura, nke kachasị mma
Zaghachi Cristian Camilo Correa Lezama
Faịlụ d805 na d806 bootloader bụ n'ezie baseband maka ụdị ndị a. Yabụ d802 botloader na-emetụta ụdị atọ a ma ọ bụ usoro ahụ enwere chinchi?
Zaghachi onye mmeri Manuel
Onwuka Onwenu (@onyekaonwenu) dijo
Mmmmm, kedu ihe onye ọrụ a na-eme? Ka anyị lee ma anyị kwụsị ịgha ụgha!
Zaghachi Marco JKF (@MarcoJKF)
M etinyego ya, ugbu a enwere m ike, mana ahụrụ m na ọ nweghị otu interface ahụ dị ka nseta ihuenyo ị bulitere. Ọ ga-amasị m ịme ka mkpọchi dị na ogwe ntụgharị ahụ dị ntakịrị ma gbanwee ụfọdụ ọkwa ọkwa. Olee otú m ga-esi mee ya?
Enwere m d806 m nọ na cloudyg2 2.2 na mgbake CWM, m ga-agbanye TWRP ma m ga-awụsị ọkụ na BootloaderKK kemgbe m nọ na KK ???
Wụnye ya na D805 wee nweta 4G n’enweghị nsogbu ọ bụla na TIGO COLOMBIA. Daalụ.
Luis, kedụ ka i mere, nke m dị ka a na-eme bricked… ị nwere ike inyere m aka?
Zaghachi Oscar Camargo
Ikenna Nwogu dijo
Emere m ya site na nkwụsị na D802 ma ọ nọrọla na buut
Otu ajuju, enwere m kitkat na D806 ma na emelitere nke ọma ahapụrụ m ebe nchekwa m dị na 16gb kama 32gb. Ọ bụrụ na m na-ehichapụ ya dị ka egosiri na vidiyo ahụ, na mgbe ị na-etinye lollipop, enwere m ike iweghachite nkebi nke 32gb mbụ?
Enyi, enyeghi m mgbama n'aka onye oru, gini nwere ike idi? Ekele si Nicaragua !!
Zaghachi LessLoz Aguirre
Ihe nlereanya m bụ D805 ... ọ ga-abụ okwu nke KK Boatloader?
M edoziworị, m ga-agbanye Flash baseband na ihe niile dịkwa mma !!! 😀
Enyi, enwerem otu nsogbu, onye oru enyeghi m signal, olee otu baseband si acha ọkụ?
enyi, kedu ka imere na kedu baseband i turu? ekele
enyi, kedu ka i mere? ekele
Enyi, gini kuru gi iji naghachi nke onye oru gi?
Agbanyela m rom ma ugbu a, ekwentị anaghị akwụsị ịmalitegharị. Ihe ngosi LG na-apụta, gbanyụọ wee pụta ọzọ n'ụzọ ahụ oge niile.
Gịnị nwere ike ịbụ?
Ndewo enyi, ọ dakwara m otu ụzọ ahụ na ọ gafere akara LG. ihe ị ga-eme bụ pịa bọtịnụ ike ruo mgbe ọ gbanyụrụ mgbe njirimara ahụ na-apụta ọzọ ozugbo pịa ike + vol ebe ahụ ọ na-alaghachi ma gbanyụọ ya ozugbo akara ahụ pụtakwara ọzọ pịa ike + vol ala ọzọ N'ebe ahụ, tinye otu nhọrọ ebe ị ga-enye ee mgbe ahụ ee ee ma ọ bụ ya, ọ bụ ya, tinye mgbake ma gaa n'ihu. N'oge ahụ mgbe rom na-arụ ọrụ nke ọma, naanị ihe bụ na mgbe ị na-elele ihe ngwanrọ software ọ bụ maka igbochi.
Zaghachi Edwin Rodriguez
Enyi, M jisiri ike banye Recovery, kedu ihe m ga-eme ka akara LG ahụ ghara ịga n'ihu
Ndewo, kedu ka ị mere, amaghị m ma ọ bụrụ na ọ mere mmadụ .. Rom anda de Diez, naanị mmejọ m na-achọ mgbe m na-ejide ihu, ihe oyiyi nwere akara mkpuchi pụtara mgbe m lere ya anya, enweghị m ike budata faịlị ma ọ bụ zipu mgbe m chọrọ ime ya, a kwụsịrị ozi wifi, .. ọ dị onye maara ka esi edozi nsogbu ahụ ???
Zaghachi Maty Trelew
Enyi ike gi na D801?
Zaghachi Miguel Rivas
ndị enyi m gbasoro usoro niile na ekwentị m rapaara na mpempe buut, ọ naghị esi ebe ahụ pụta, agbalịrị m ihe niile, mana ọ naghị edozi ike nyocha + mpị n'ọtụtụ oge, ọ naghị abanyekwa na ọnọdụ nkwụghachi ma ọ bụ ihe ọ bụla, otu osisi na nkuzi ndị a anaghị edozi nhọrọ nke ụdị atụmatụ b
Akara ahụ anaghị egbochi m ịpụta ugboro ugboro, kedu ka ị siri banye?
nwale: Pow + Vol- ______ (v +) + (v-)
Zaghachi Miguel Jáenz
ka njọ na njọ, m naputa ekwentị site na wụnye ngwaahịa rom, na mgbe ahụ, m na-agbalị ọzọ iji wụnye rom si na peeji a na ekwentị na-kpam kpam bricked, na twrp adịghị aghọta / data, otú ahụ ka m na-enweghị ike naputa ya, niile ezighi ezi !!
Esi rom si lenovo A288t 2.3, achọrọ m ya ma enweghị m ike ịchọta ya ịgbanwe asụsụ. Daalụ
Rom dị mma, agbasoro m usoro nke arịrịọ leta maka lg g2 D806 ma ọ dị mma, mana enwere m tebụl mgbe otu izu gachara mgbe ọ bụla akpọchiri ekwentị m ma chọọ ịmepe ihuenyo ahụ. dị ka nke rụrụ arụ na agba agba ọsọ, mana ọ bụ naanị nke abụọ mana mgbe nke ahụ gasịrị ọ na-arụ ọrụ zuru oke, gịnị nwere ike ịbụ ??? Ngwa ọ bụla metụtara usoro ahụ? Maka na ebidoghị m ime ya, atụbaghị m ekwentị m ma ọ bụ ụdị ihe ahụ.
M na-efu efu usoro nke iweghachi ngwa?
Nsogbu! A hapụrụ m na akaghị nke reboots na-aga n'ihu mgbe bootloader ikpeazụ na-egbu maramara
Echefuru m ikwu na ọ naghị abanye bootloader ma ọ bụ ọnọdụ mgbake.
Aga m enyere gị aka Kalabras dee leta m FB cristianzao@live.com chọọ m dị ka nke a
N'ihi enyemaka nke Francisco, aghaghị m ikele na ROM dị ezigbo mma, ọ masịrị m nke ukwuu, esi m Cloudy 2.1, mee usoro ma budata KKBootloader ma wụnye TWRP 2.8.6.1, emekwara m usoro niile , ma oh juru m anya na ọ pụtara akara ugboro ugboro, yabụ m were eriri m na pendrive, budata KKBootloader mana 2.8.5.1 ma wụnye ya, m wee wụnye evomagic ahụ, m wee gbafee KKBootloader ọ wee daa nke ọma. Ihe dị mkpa, agbalịrị m ịbanye n'ọnọdụ mgbake ekele maka ụzọ dị iche karịa otu.
ike + vol ala..the logo na-egosi na anyị hapụ ma pịa ngwa ngwa vol + na ngwa ngwa vol- pịa ma nweta.
Ekele na ekele Francisco.
Na kitkat bootloader dị ka baseband lollipop
Ndewo, m si na Peru ma m nwere ụdị d805 v20a si movistar android 4.4.2 Achọrọ m ịma ma nkuzi a ọ na-arụ ọrụ maka ihe nlereanya m yana ihe ndị m ga-elebara anya ma ọ bụrụ na m mee ya na ụdị njehie m pụrụ ịchọta.
Anaghị m akwado ya. M si na Peru, enwere m movistar d805 model (Android 4.4.2) na ROM na-agba ọsọ nke ọma, mana enwere m nsogbu na BaseBand na enweghị m ohere ịnweta netwọkụ mkpanaka. Ọzọkwa akụrụngwa na-ahụrụ ugbu a dị ka d802, m furu efu m IMEI koodu na m chọpụtara na ọ heats elu ọzọ. Ana m agbalị idozi BaseBand mana enweelarị m ndakpọ olileanya (Daalụ ịdị mma m mere otu usoro nke sistemụ na ngwa m)
Juanjo Onyema dijo
enwerem lg g2 mana d800, inwere ike ime otu ahu ?? Kedu ihe ị kwadoro lollipop ma ọ bụ kitkat maka nnwere onwe batrị ka mma?
Zaghachi Juanjo Burgos
Anọ m na-eji ụlọ ahụ oge na ụnyaahụ m tụbara otu nsogbu ngebichi na akara ojii dị n'akụkụ aka ekpe, nke nwere ike ịwụnye njikwa okpomọkụ ma ọ gafere 35 Celsius C, ana m eji sel (Lg G2 D806) maka netwọkụ mmekọrịta, ma ọ bụ soro cel na-egwuri egwu, kedụ ihe ọ ga-abụ ??????
M arụnyere ya ma enweghị m mgbaàmà ọ bụla, ọ nweghịkwa ụzọ m ga-esi nweta ya
Ndewo, ụbọchị ọma, melite na sim anaghị amata m? nwere d806
Ndewo kedu ka isi eme ?? Enwere m nsogbu na sim anaghị achọpụta m, enwere m D806
Ndewo, enwere m D805, enwere m v2.2 urukpuru na agbasoro usoro iji melite na nke a, o were ụbọchị 7 ma ihe niile na-aga nke ọma belụsọ maka ihe abụọ, mgbe ị na-emegharị ntụgharị akpaka oge ụfọdụ ihuenyo ahụ agbajiri na-enweghị ekwentị ahụ hulatara na ihe ọzọ bụ na igwefoto dị n'ala, enweghị m ike ịse foto ndị ahụ nke ọma. Biko nyere aka.
ezigbo onyinye, ekele gị nke ukwuu !! Nkechi
Ndewo, na usoro nke ịwụnye TWRP ekwentị anaghịzi agbanwu ma ọ bụ naanị ndị isi na-acha na-acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ... gịnị ka m ga-eme n'okwu a?
Hernan Pereira kwuru dijo
Ohh ee !!! Ọ na-arụ ọrụ zuru oke maka LG G2 805 m, esi m Mexico, soro usoro ndị a.
Zaghachi Hernan Pereira
Hernan, onye ọrụ gị rụụrụ gị ọrụ ..
M si Mexico ma mee ihe niile otu,
Onye ọrụ ahụ anaghị arụrụ m ọrụ dịka ị si arụ ọrụ
Zaghachi Isaac Agundez Zarate
onye agha dijo
Nwoke m chọrọ enyemaka m mere ya na 805 mana enweghị m mgbaàmà ọ bụla
You mere baseband?
Kedu ihe ị pụtara na onye ọrụ gị? ị dozie nsogbu gị? gbaghara maka ịzaghachi
Emechaala m, ihe niile na-aga nke ọma, mana enwere m ajụjụ, gịnị kpatara m jiri tinye ntọala wee hụ ozi gbasara ekwentị, ọ na-amatazi m dịka D802 na ọ bụ D805? dịkwa na ngwanrọ ngwanrọ m nwetara 5.0.2 n'ụzọ echechiri, enweghị m ike ịnye ya ọtụtụ oge ka lollipop ahụ pụta?
gịnị kpatara m ji gbanwee ugbu a gaa na D802 ma ọ bụrụ na nke m bụ D805? ebee ka njehie dị? ……… mgbe m na-aga ibudata TWRP maka 805 nhọrọ nke na-apụta bụ "802/5/6" ma ọ bụrụ na m budata ya, ọ ga-ebudata dị ka 802! Amaghi m ka esi eme ya, echere m na nke ahu bu nsogbu, mana rom enyeghi m nsogbu
Ndewo, kedu ka ị mere? Enwere m D805, emere m usoro niile mana akara onye ọrụ anaghị ebu, onye nwere ike inyere m aka dịka ahụmịhe gị? Esi m peru.
Alfredo, emere m ya na D 805 ma o nyeghi m nsogbu na ihe ọ bụla na netwọkụ, echere m na ihie ụzọ gị anaghị eme ka isi na-acha ọkụ.
Naanị nkọwa bụ na m si Nicaragua esighi na Peru
Otu ihe ahụ mere m, Alfredo, emere m ihe niile ziri ezi na akara ngosi anaghị ejide m
Enwere m lg g2 d805….
mmadu gwa m ihe mere oh onye oru ji jide gi ekele
Onye si na Chile nke nwara ya .. oge gara aga, emelitere m lg l5 ma ọtụtụ na-ekwu na m furu efu mgbaàmà ahụ. Achọrọ m ịrịọ lg nkwado iji dozie nke a nke were obere oge. Ọ bụrụ na mmadụ si Chile biko nye gị echiche
Na-arụ ọrụ zuru oke na g2 d806 na argentina. M gbasoro nzọụkwụ na leta ahụ wee bulie 2g 3g na 4g na izu okè.
Mma ekwentị na-arụ ọrụ ma e jiri ya tụnyere kitkat. Na antutu benchmarck ana m aga 40900 yana quadrant 25000.
Cheregodi, m si Argentina kwa ma achọrọ m ịma ma ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụrụ na enwere ike itinye ya na twrp na-adịbeghị anya ebe ọ bụ na enweghị m ike ịchọta nsụgharị 2.8.1
Lucas, olee TWRP ị jiri?
Zaghachi Sergio Ruiz
Daalụ nke ukwuu. Ya mere nke ọma kọwara na ọ dị mfe, ekwentị dị ka ihe ọhụrụ na ihe niile na oge mbụ! Ọ na-aga ngwa ngwa ma ọ bụrụ na tupu enwere m obi ụtọ na batrị ugbu a ọ bụ ihe dị ịtụnanya. Otu ojiji ahụ m nyere ya ruo ugbu a ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% karịa. Daalụ ọzọ!
Zaghachi na Mon
Ndewo Fransisco, esiri m Argentina, enwere m lg h2 d806 na kitkat na eziokwu bụ, ahụrụ m rom n'anya mana enweghị m ike ịchọta ihe atụ 2.8.1 twrp na amaghị m ma m ga - eme ya na onye ọzọ nlereanya, ajụjụ ọzọ bụ, agaghị m ekwentị na-ahapụ enweghị mgbaama?
Nnọọ. Wunye ihe niile nke ọma na d806 m, nsogbu bụ na ọ na-efunahụ mgbaama ahụ oge niile, nke ahụ na-emekwa ka batrị na-agbapụ ngwa ngwa. Ihe ndị ọzọ dị mma, enwere ihe ngwọta maka nke a? Enwere m ndị ọrụ si Argentina
M ga-enwe ekele maka enyemaka gị!
Enyi Luis, ị chọtara ihe ngwọta maka nsogbu mgbaama ahụ?
Gini mere m ji nwee nsogbu m?
Anọ m na-eji ya na nsogbu m nwere bụ na enweghị m mgbaàmà data ọ na-esiri ya ike ijikọ, ọ na-emekwa m mgbe ejikọrọ m na Wi-Fi na mkwụpụ, njikọ data na-efu ya.
Enyi, gbaghara m, ma ọ bụrụ na m nwere ihe mbụ KK ọ dị mkpa Flash na Bootloader? Daalụ.
Zaghachi Luis Diaz
Ymụ nwoke, Gụọnụ….
The boatloaderKK na-eje ozi nke mere na, ozugbo arụnyere Lollipop, ekwentị na-ebuli ndị agha kwekọrọ na mba ekwentị ahụ, ụdị ekwentị na-aga site na mba ma ọ bụ mpaghara ala, kama. dịka ọmụmaatụ BootLoaderKK maka D806, kwekọrọ na band ndị a na-ere D806.
Ihe Lucas kwuru, na ọ na-eme ọfụma na Argentina, aga m ezighachiri ya mma a ugboro atọ… hahaha… M na-atụ ụjọ, mana m na-egwu ya ọzọ!
Ihe ịga nke ọma niile!
Sergio Ọ dị m nwute ịghafu gị, emere m usoro mana ọ naghị ahọrọ m inei ya mere ọ naghị akpọ, ọ naghị abanye mgbake ma ọ bụ ọnọdụ nbudata, ị nwere ike inye m aka
ndele m gbalịrị ibudata bootloaderkk d805 mana njikọ ahụ agbajiri :)
Zaghachi ka condebreton
ndị m mere ihe a cell na-arụ ọrụ mana m na-ehichapụ imei na enweghị m ike ịkpọ m Achọrọ enyemaka
Ndewo, ị nwere ike ịgwa m ma ọ bụrụ na usoro mmelite a enyere m aka idozi nsogbu Wi-Fi dịka ekwentị ka na-ejikọ ma WiFi anaghị arụ ọrụ. Ma ọ bụ dịka ọmụmaatụ nsogbu nke GPS na-egbochi mgbe ijikọ data ahụ, daalụ maka azịza gị.
Zaghachi juan carlos rincon
Ọ na-agba ọsọ zuru oke, mana ụnyaahụ amalitere m inwe nsogbu na wifi, taa anabataghị m ozi nke njikọ, m na-agbalị ime ka wifi rụọ ọrụ ma ọ na - ekwu: WIFI na - arụ ọrụ, ma site na ya ọ naghị eme. Nkwado ọ bụla?
Emere m nkuzi niile na ekwentị anaghị agafe m akara lg
daalụ maka onye nkuzi
Zaghachi ka bakod
Cheregodi, mana tupu ị mee nkuzi banyere etu esi etinye ROM na ekwentị anyị, ọ dị mkpa ka ị mee nke ọma n'ihi na na ọkwa gara aga m wụnyere «ROM» na m bricked ekwentị m, enwere m ike idozi ya mana onye ọ bụla kwesịrị ịma na ọ dị mkpa na ROM bụ naanị maka ụdị ekwentị anyị, ya bụ, d802 ebe ọ bụrụ na anyị ejiri otu maka d805, ihe ọ bụla nwere ike ime, site na ịmaliteghachi mgbe niile ma ọ bụ brik ma ọ bụ mmalite mmalite, ọ gaghị ekwe omume ịmata Kedu.
Daalụ maka ịnwale inyere anyị aka imeziwanye ama anyị ma ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-eme nkuzi.
Ndewo Enyi !, Enwere m LG G2 na kitkat na achọrọ m inye ya ọhụụ, m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na rom ahụ adịghị mma, kedu nsogbu ọ na-eweta oge? Ọ ga-amasị m ịmara ma m wụnye nke a ma ọ bụ igwe ojii, ọ dị mkpa iji wụnye bootloader?
Daalụ, m ga-enwe ekele maka ya.
Zaghachi Adrian Ruiz
Francisco a alo. Enwere m LG G2 d806 na kitkat. M gbasoro usoro ndị ahụ, mana enwere m nsogbu na mgbe m chọrọ ịmeghachi ụlọ ọrụ mmepụta ihe m nwetara njehie site na nyocha akwụkwọ, na enweghị m ike ịlaghachi na kitkat dị ka m nwere na mbụ.
N'ihi ya, m na-anwa ịwụnye ROM a azụ. Mana m ejighi n'aka etu esi eme bootloader ihe n'ihi na njikọ ya agbadata.
njikọ twrp na BootloaderKK maka d805 dị ala, ịnwere ike bulite ha ọzọ biko daalụ
Linki gị anaghị arụ ọrụ d805 deat.